Nomena hery mba ho tonga zanak'Andriamanitra
"Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany" - Jao. 1:12
Tsy azontsika amin'ny herin'ny tenantsika ny maha-zanak'Andriamanitra. Ireo izay mandray an'i Kristy ho Mpamonjy ny tenany ihany no omena hery ho tonga zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra. Tsy hain'ny mpanota ny miala amin'ny fahotana amin'ny herin'ny tenany. Mba hahavitany izany dia tsy maintsy mikatsaka hery avy any ambony izy. Hoy i Jaona: "Indro ny Zanak'ondrin'Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao!" I Kristy irery no manana fahefana hanadio ny fo. Ny hany azon'ny olona izay mikatsaka ny famelan-keloka sy ny faneken 'Andriamanitra ambara dia hoe:
"Tsy manana na inona na inona eto am-pelatanako aho;
Fa eo am-pototry ny hazo fijalianao no iantorahako".
Ny teny fikasana mba ho tonga zanak'Andriamanitra anefa dia omena ireo rehetra izay "mino ny anarany". Ny olona rehetra izay manatona an'i Jesôsy amim-pinoana dia handray famelan-keloka. — RH, 03 Septambra 1903
Manova ny fo ny fivavahan'i Kristy. Ovany hanana fisainana araka ny lanitra ny olona izay nisaina araka izao tontolo izao dia noho ny hery miasa mangina avy aminy, dia lasa mahafoy tena ny olona tia tena, satria izany no toetran'i Kristy. Izay mpametsifetsy sy mpanao teti-dratsy dia tonga mahitsy, ary tonga fahazarany ny manao amin'ny hafa toy izay tiany hatao amin'ny tenany. Ny mpanaram-po dia ovany avy amin'ny fahalotoana ho amin'ny fahadiovana. Mandray fahazarana tsara izy; satria tonga hanitry ny fiainana ho amin'ny fiainana ho azy ny filazantsaran' i Kristy. — SW, 07 Febroary 1905
Nasehon'i Kristy teo amin'ny fiainany ny toetr'Andriamanitra, Izay "nampihavana izao tontolo izao taminy". Efa nosimbain'ny fahotana loatra ny olona ka tsy vitany, amin'ny herin'ny tenany, ny hampifandrindra ny fiainany amin'ilay Andriamanitra madio sady feno fahatsarana. Kanefa azon'i Kristy atao, rehefa navotany tamin'ny fanamelohan'ny lalàna ny olona, ny mizara ny herin'Andriamanitra mba hampiarahina amin'ny fiezahan'olombelona. Koa amin'ny alalan'ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Kristy no ahafahana miantso indray ireo taranak'i Adama hoe "zanak'Andriamanitra". Rehefa mandray an'i Kristy ny fanahy iray, dia mahazo hery mba hivelona ny fiainan'i Kristy izy. — PP, 64.